Guddigii ay Puntland u xil-saartay diidmada Shillin Soomaaliga oo soo saaray go‘aamo | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Guddigii ay Puntland u xil-saartay diidmada Shillin Soomaaliga oo soo saaray go‘aamo
Garoowe (Halqaran.com) – Guddiga Puntland u xil saartay ka soo talabixinta qiima dhaca Shilling Soomaaliga ayaa soo bandhigay qodobo dhowr ah oo ay ku taliyeen si xal loogu raadiyo Qaadashada Shillinka Soomaaaliga.
Go’aanada oo ka kooban 7 qodob ayaa sahli kara in lacagta Shillin Soomaaliga si caadi ah looga isticmaalo deegaannada Puntland, isla markaana ay meesha ka baxdo cabashada Dadweynaha.
Haddaba halka hoose Ka Akhriso Go’aamada ay soo saareen Guddiga uu Magacaabay Madaxweynaha Puntland.
1- In la socodsiiyo shilling Soomaaliga, go’aamada waxaa iska kaashanaya dowladda, ganacsatada iyo bulshada, iyadoo mid walba qayb loo jaan gooyay xarayn doono.
2- In Bangiga lagu xereeyo lacagta shilling Soomaaliga ee ku badan suuqa, dowladda ayaa bar xerayn doonta, halka barka kalena ay ganacsatadu xerayn doonaan.
3- Dowladdu canshuurta dekedda Boosaaso 20% ku qaaddo Shilling Soomaali.
4- In dowladdu mushahar iyo adeegyada dowladda 20% ku bixiso Shilling Soomaali.
5- Waxaa meesha laga saaray kala duwanaanshanaha sarifka lacagaha qalaad iyadoo uu jaan goyn doono bangiga dhexe ee Puntland.
6- Waxaa la joojiyey qulqulka lacagaha Shilling Soomaaliga ee u kala gooshaya gobolada Puntland, iyadoo loo xilsaaray bangiga dhexe ee Puntland.
7- In dowladdaha Hoose canshuuraha ku qaadaan Shilling Soomaaliga, gaar ahaan kuwa maalin laha ah.
8- In sariflayaashu ruqsad ka qaataan bangiga dowladda, ayna raacaan xeerarka bangiga si uusan u imaan khalkhal sarif.
9- Shirkadaha isgaarsiinta waxaa loo fasaxay adeegyadii horay looga xayiray.
10- In shirkadaha Ganacsi ee gaar ka loo leeyahay, gaar ahaan korantada iyo biyuhu ka qaadaan macaamiishooda shilin Soomaaliga.
diidmada Shillin Soomaaliga